डि’भोर्स पछि पहिलोपटक बखत र प्रतिभा मिडियामा (भिडियो सहित)
Homeसमाचारडि’भोर्स पछि पहिलोपटक बखत र प्रतिभा मिडियामा (भिडियो सहित)
February 26, 2021 admin समाचार 3686
भाइरल जोडी बखत र प्रतिभाको बारेमा अहिले फेरी सामाजिक सञ्जा’लमा चर्चा सुरु भएको छ । एउटा यस्तो अ’चम्मको जोडीको अनपेक्षित वि’योग भए पछि फेरी चर्चा सुरु भएको हो । उनीहरुको डिभोर्सको खबरले शुभ’चिन्तकहरु समेत चि’न्तित भएका छन् । बच्चा भन्दा पनि सानो श्रीमान् भएका का’रण यो जोडी सामाजिक सञ्जालमा चर्चित थियो ।
बखतले सार्व’जनिक रुपमा आफुहरुको कुरा सार्वजनिक गरेको भएपनि प्रतिभाले भने केही बोलेकी थिइनन् । तर अहिले पहिलो पटक प्रतिभाले पनि सम्बन्ध विग्रिएको खुलासा गरेकी छन् । उनले अब बखतसंग बस्न नसक्ने बताएकी छन् ।
प्रतिभाको यस्तो कुरा सार्व’जनिक भएपछि फेरी दुवै जनालाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल भएको छ । छलफलमा पनि एक अर्कालाई गल्ती गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिभाले बख’त आफै छोडेर जाने अनि प्रतिभाले छोडेर गै भन्दै बे’ इ ज्ज त गरेको आरोप लगाएकी छन् । उनीहरुको कुरा सुन्दा सानो असमझदारीले सम्बन्ध विग्रि’एको बुझ्न सकिन्छ ।
उनीहरुले यो भेटमा नयाँ कुरा पनि खुला’सा गरेका छन् । जतिबेला सामाजिक स’ञ्जालमा भाइरल भएका थिए त्यती बेला उनीहरुको विवाह नै नभएको बताएका छन् । केही समय संगै बस्ने सम्झौ’ता गरेर काठमाडौ गएको उनीहरुले स्वीकार गरेका छन् । बखतले अनावश्यक रुपमा आफ्ना बारेमा गलत कुरा यु’ट्युवमा भाइरल गरेको प्रतिभाको आरोप छ । – इताजा खबरबाट
आज मिति २०७७ फाल्गुन १४ गते शुक्रबारको राशिफल हे’र्नुहोस्
March 27, 2021 admin समाचार 2323
सामाजिक संजालका कार’ण अहिले युवा पुस्ता वि’ग्रन थालेका छन् । वुटवलको कालिकानगरमा बस्ने मिना श्रेष्ठ अहिले आफ्ना छोरा जनक श्रेष्ठलाई विद्यालयमा ल्याएको रिज’ल्ट हेरेर गाली गरिन् । उनका ९ कक्षामा पढ्ने १६ वर्षका छोराको रिजल्ट
December 7, 2020 admin समाचार 4647
नायिका स्वेता खड्क दोस्रो बैवाहिक बन्धनमा बाँ’धिएकी छन् । उनको सोमबार धनगढी’का विज’यन्द्र सिंह रावतसँग विवाह भएको हो । उनले बेहुली हुँदा’का तस्बीरहरु इस्टाग्राम’मा सेयर गरेकी छन् । स्वेताले यस’अघि २०७१ साल असारमा नेपाली चलचि’त्र
June 3, 2021 admin समाचार 1011
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (204951)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (196426)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (195925)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (195787)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (194186)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (193905)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (192152)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (191680)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (184575)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (161260)